Chii chinonzi Apple Tap Kubhadhara uye maPhones angashandise sei kugamuchira mubhadharo?
apuro yakaunza chinyararire chinhu chitsva chinonzi Tinya kuti ubhadhare pa iPhone. Inobvumira maPhones anoenderana kugamuchira mubhadharo kuburikidza neApple Pay, asingabatike kiredhiti uye makadhi ekubhengi, uye mamwe madhijitari wallet. Asi chikamu chakanakisa ndechekuti hapana imwe hardware inodiwa.
Hezvino zvese zvaunoda kuziva nezve Tap to Pay.
Chii chinonzi Tap Kubhadhara pa iPhone?
Muna Kukadzi 2022, Apple yakazivisa hurongwa hwekuburitsa Tap to Pay pa iPhone.
Izvo zvinokutendera iwe kushandisa nharembozha seyekubhadhara terminal. Zvinotendwa kutora kweApple kwekutanga Mobeewave ndiyo hwaro hwehunyanzvi uhu. Iyo ficha inotsigira mubhadharo kubva kuApple Pay, isingabatike kiredhiti uye makadhi ekubhengi, uye mamwe madhijitari wallet. Tinya kuti ubhadhare zvinoonekwa nekuti, kare, mabhizinesi aibvuma kubhadhara asingabatike pa iPhone aidiwa kushandisa imwe yechitatu-bato hardware senge Square Reader dongle.
Ko Tap Kubhadhara pa iPhone inoshanda sei?
Parizvino, zvinongogumira kumabhizinesi nevatengesi vanoshuvira kugamuchira mubhadharo usingabatike kuburikidza neanotsigira iOS maapplication vachishandisa iPhone XS kana nyowani. Pakubuda, bhizinesi rinokukurudzira kuti ubate yako iPhone kana Apple Watch, isingabatike kiredhiti kana kadhi rechikwereti, kana imwe chikwama chedhijitari padyo ne iPhone yemutengesi, uye ipapo kubhadhara kunopedzwa zvakachengeteka uchishandisa NFC tekinoroji.
Mune mamwe mazwi, maererano neApple, vatengesi vese vachazoda mune ramangwana maPhones avo kuitira kuti vagamuchire uye vagadzirise kubhadhara.
Ndeapi mabhizinesi anotsigira Tap Kubhadhara pa iPhone?
Stripe yakazivisa kuti ichave yekutanga kubhadhara puratifomu kupa "Bata Kuti Ubhadhare pa iPhone" kune vatengi vebhizinesi ravo, kusanganisira iyo Shopify Point yeKutengesa app, muchirimo 2022. Mamwe mapuratifomu ekubhadhara uye maapplication achatevera gare gare mugore, sekureva. kuApple. Apple Zvitoro muUS ichaburitsawo chimiro muna 2022.
Tap to Pay pa iPhone ichavepo riini?
Iyo ficha ichavhurwa muUS gare gare muna 2022. Inoratidzika kunge yakasarudzika kuUS pakuvhurwa, pasina dzimwe nyika dzakaziviswa.
Ndeapi ma iPhone modhi anotsigira Tap kuti Ubhadhare?
Kunyangwe Tap Kubhadhara isati yagadzirira kuti iwe ushandise - iyo inotsigira API inowanikwa muiyo iOS 15.4 beta 2. (dzidza sei kuisa izvozvo pano), inogona kugonesa chimiro pa iPhone XS uye gare gare modhi.
Kune maPhones echikuru ane NFC - asi, parizvino, iyo iPhone 6, 7, uye 8 modhi haisi pane inoenderana rondedzero.
Chii chinonzi Apple Pay, chinoshanda sei, uye unochimisa sei?
Maitiro Ekutambira Kubhadharwa Pamhepo Mahara [Vanomwe Vepamusoro Vanobhadhara)
Filed Under: Mac & Apple Tagged With: Tinya Kuti Ubhadhare Cash App, Tinya Kuti Ubhadhare Iphone, Tinya Kuti Ubhadhare Zvakachengeteka, Tinya Kuti Ubhadhare Chengetedzo, Tinya Kubhadhara System, Tinya Kuti Ubhadhare Technology